Izindaba - Indlela Elungile Yokufakwa Kwamalambu Ezimo Eziphuthumayo
Izinyathelo zokuphepha zokufakwa kwamalambu ezimo eziphuthumayo
1. Okokuqala, thola ukuthi ibhokisi lamandla lamalambu likuphi, bese uwafaka ngendlela eyiyo, bese ulungisa izintambo ezinemigqa emithathu nengaphakathi emihlanu yobude obuhambisanayo.
2. Sebenzisa isikrufu esinamacala ayisithupha ukuvula ikhava yebhokisi lamandla okungena kwekhebula bese ususa i-ballast. Xhuma umkhawulo owodwa wekhebula lezintathu ezilungisiwe kusuka ekuphumeni kwebhokisi lamandla kuye ku-ballast ngokuya ngezidingo zokuqhuma-proof, bese uxhuma uhlangothi olulodwa lwentambo eyisihlanu esemqoka kusuka kokufakwa kwebhokisi lamandla kuya ku-ballast , bese uxhuma ibhethri Faka izindawo ezihambelana kahle nezintambo zebhethri ebhodini lesifunda, *** vala ikhava yebhokisi lamandla ukuyilungisa.
3. Ngemuva kokulungisa isibani nebhokisi lamandla ngokuya ngesimo esinqunyelwe kusengaphambili, sebenzisa isikrufu seheksagoni ukuvula isikulufa esisesembozweni sangaphambili sesibani. Ngemuva kokuvula ikhava engaphambili, xhuma omunye umkhawulo wekhebula lezinto ezintathu kusibani ngokuya ngezinga lokuqhuma, bese ulungisa ikhava yangaphambili ngemuva kokuthi ixhunyiwe, bese uxhuma omunye umkhawulo wekhebula eliyisihlanu emandleni wedolobha ngokwezinga lokuqhuma. Lapho-ke ukukhanya kungatholakala.
4. Vula ukhiye wokushintsha umsebenzi ophuthumayo ku-ballast uye endaweni ye-OFF, futhi umsebenzi wangaphandle ophuthumayo wokulawula izintambo wesibani uzocushwa. Uma ungafuni ukusebenzisa ucingo ukulawula isimo esiphuthumayo, bese udonsela iswishi endaweni ye-ON, futhi izosebenza ngokuzenzakalela lapho amandla enqanyuliwe. Vula umsebenzi ophuthumayo.
5. Isibani esiphuthumayo sidinga ukunakwa ngesikhathi sokusetshenziswa. Uma ukukhanya kufiphele noma ukukhanya kwe-fluorescent kunzima ukuqala, kufanele kukhokhiswe ngokushesha. Isikhathi sokushaja cishe ngamahora ayi-14. Uma ingasetshenziswa isikhathi eside, idinga ukukhokhiswa kanye njalo ezinyangeni ezi-3, kanti isikhathi sokushaja cishe ngamahora ayi-8. Intengo yokukhanyisa okuphuthumayo
Yimalini ilambu eliphuthumayo? Kakhulu kuya ngohlobo lwayo, imodeli nokunye umehluko. Intengo yamalambu aphuthumayo ejwayelekile imvamisa izungeze ama-yuan angama-45, intengo yamalambu ophuthumayo anezindinganiso zikazwelonke imvamisa izungeze ama-yuan angama-98, kanti intengo yamalambu aphuthumayo enobubanzi obungu-250 imvamisa icishe ibe ngama-yuan angama-88. Intengo yamalambu aphuthumayo asendlini izobe ishibhile, inqobo nje uma kuzobizwa i-yuan noma i-Ten yuan. Kodwa-ke, intengo yamalambu ophuthumayo anophawu, njengezibani eziphuthumayo zePanasonic, imvamisa iba phakathi kwama-yuan ayi-150 kuye kwangama-200.
Amakhono okuthenga wokukhanyisa okuphuthumayo
1. Khetha eyodwa enesikhathi eside sokukhanyisa
Njengemishini yezimo eziphuthumayo yomlilo, umsebenzi omkhulu wamalambu aphuthumayo ukuhlinzeka ukukhanyisa indawo yengozi isikhathi eside ukusiza abasebenzi bezicishamlilo ukubhekana nengozi. Ngakho-ke, lapho uthenga amalambu aphuthumayo, sidinga ukukhetha isikhathi eside sokukhanyisa. Singacabanga ngebhethri namalambu elambu lesimo esiphuthumayo.
2. Khetha ngokuya ngemvelo yakho
Uma sikhetha amalambu okuphuthumayo, siphinde sikhethe ngokuya ngemvelo yethu. Uma kuyindawo enobungozi obukhulu, kungcono ukhethe ilambu eliphuthumayo elinomsebenzi wokuqinisekisa ukuqhuma. Uma itholakala endaweni eyi-***, khona-ke kungcono ukhethe ilambu eliphuthumayo elishumekiwe, elingathinti ukubukeka futhi libe nomphumela omuhle wokukhanyisa.
3. Khetha isevisi enhle emva kokuthengisa
Amalambu ophuthumayo yimikhiqizo ye-elekthronikhi esetshenziswa kakhulu. Nakanjani sizohlangabezana nezinkinga ezahlukahlukene ngesikhathi sokusetshenziswa. Ngakho-ke, lapho sithenga amalambu okuphuthumayo, sidinga ukukhetha labo abanezinsizakalo ezinhle zangemva kokuthengisa kanye nesikhathi eside sewaranti. Kungale ndlela kuphela lapho singakhululeka khona.
Ukuhlukaniswa kwemishini yokukhanyisa okuphuthumayo
1. Izibani eziphuthumayo zomlilo
Izibani eziphuthumayo zomlilo ziyadingeka kuzo zonke izakhiwo zomphakathi. Isetshenziselwa kakhulu ukuvimba ukuphuma kwamandla ngokungazelelwe noma imililo ukuthi ingenzeki njengenkomba yokuxhumanisa yokukhishwa kwabantu. Isetshenziswa kabanzi ezinxanxatheleni zezitolo, ezakhiweni zamahhovisi, emahhotela, njll., Izibhedlela, izindawo ezingaphansi, njll.
Vele, kukhona empeleni izinhlobo eziningi zokukhanyisa okuphuthumayo komlilo:
a. Kunezinhlobo ezintathu zamalambu ezimeni zokusebenza ezehlukene. Esinye isibani esiphuthumayo esiqhubekayo esinganikeza ukukhanya okuqhubekayo. Akufanele icatshangwe ngokukhanyisa okujwayelekile, kanti enye iyisibani esiphuthumayo esingaqhubeki esisetshenziswa lapho isibani esivamile sokukhanyisa sihluleka noma singasebenzi. , Uhlobo lwesithathu ilambu eliphuthumayo eliyinhlanganisela. Kufakwe imithombo yokukhanya engaphezu kwemibili kulolu hlobo lokukhanya. Okungenani eyodwa yazo ingahlinzeka ngokukhanyisa lapho ugesi ojwayelekile wehluleka.
b. Kunezinhlobo ezimbili zamalambu ezinemisebenzi ehlukene. Eyokuqala ukuhlinzeka ngamalambu okukhanyisa adingekayo ezindleleni zokuhamba, izindlela zokuphuma, izitebhisi nezindawo ezingaba yingozi uma kwenzeka ingozi. Okunye ukukhombisa ngokusobala inkomba yokuphuma nezindima. Uhlobo lwamalambu we-logo ngombhalo nezimpawu.
Izibani zohlobo lwezimpawu ziyizibani zokukhanya eziphuthumayo ezivame kakhulu. Inezidingo ezijwayelekile kakhulu. Ukukhanya kwangaphandle kwesibonakaliso kungu-7～10cd / m2, ukuqina kwesibalo kombhalo okungenani kungu-19mm, futhi ukuphakama kwawo kufanele futhi kube yi-150mm, nebanga lokuqaphela Kungama-30m kuphela, futhi kucaca kakhulu lapho ukukhanya kombhalo kunokuphikisana okukhulu kunesizinda.
Ukukhanyisa okuphuthumayo komlilo kuqukethe umthombo wokukhanya, ibhethri, umzimba wesibani nezakhi zikagesi. Ukukhanya okuphuthumayo kusetshenziswa isibani se-fluorescent nomunye umthombo wokukhanya okhipha igesi kufaka ne-converter nedivayisi yayo ye-ballast.
2. Ukukhanyisa okuphuthumayo
Uhlobo lwesibili lokukhanyisa okuphuthumayo lusetshenziselwa ukukhanyisa okuphuthumayo ezindaweni zokugcina izimpahla, emiseleni, emigwaqweni nakwezinye izikhathi. Inezici zokusebenza kahle okuphezulu nokonga amandla. Isebenzisa kakhulu isizukulwane sesine sokuvikelwa kwemvelo okuluhlaza, umthombo wokukhanya omhlophe onamandla amakhulu omhlophe. Lo mthombo wokukhanya unokusebenza okukhanyayo okuphezulu kakhulu, futhi impilo yenkonzo yawo yinde impela. Akudingi ukunakekelwa isikhathi eside.
Futhi ngumkhiqizo wokuklama osebenziseka kalula, ongashintsha ngokuzenzakalela futhi ngesandla imisebenzi ephuthumayo. Idizayini yamandla ebanzi kulula ukuyisebenzisa, ngokukhanya okuthambile, akukho ukukhanya, futhi akukho ukukhanya, okungavumela opharetha ukuthi bathuthukise ukusebenza kahle komsebenzi. Izinto ezingasindi zegobolondo zegobolondo ziyamelana nokugqoka, ziyamelana nokugqwala, azinamanzi nothuli-ubufakazi.
Ukufakwa ukuphakama kwelambu eliphuthumayo
Ngikholwa ukuthi lapho uthenga, uzothola ukuthi noma ngabe mingaki imigwaqo kanokusho nemfashini, kukhona ilambu eliphuthumayo odongeni. Eqinisweni, lokhu kufakwe ngokuya ngemithetho yomnyango womlilo. Yize ibukeka ingathandisi neze, iphephile. Ngasikhathi sinye, kulolu hlobo lwerobhothi oluphuthumayo, ikhwalithi akumele ihlangabezane nezinga elithile kuphela, kepha futhi nezinga lokuhlola lomnyango ofanele.
Ezimweni eziningi, ukuphakama kwalolu hlobo lwesibani kungu-2.3m. Eqinisweni, lokhu kunesisekelo esithile. Njengendawo yethu yokuhlala ejwayelekile, ukuphakama kwesitezi ngasinye kungama-2.8m, futhi ukuphakama kwezindawo zokuhweba kuzoba ngaphezulu. Ngakho-ke, ukufaka ilambu eliphuthumayo ekuphakameni okunjalo kwanele ukufeza umphumela wokukhanyisa, futhi futhi kulula kakhulu ukugcinwa.
Kwezinye izindawo ezikhethekile, ukuphakama kokufakwa komkhiqizo nakho kunezinye izidingo, njengezitebhisi noma amakhona. Lezi zindawo eziyingozi ezijwayele ukuminyana nokuqhuma zingadala izingozi ezimbi kakhulu ngoba azikwazi ukubona kahle ngesikhathi sokuphunyuka okuphuthumayo. Ngakho-ke, amalambu okuphuthumayo kufanele afakwe eduze nomhlabathi kulezi zindawo, futhi ukuphakama akufanele kudlule imitha elilodwa.
Incazelo yokufakwa kokukhanyisa okuphuthumayo
Ngokuvamile, lolu hlobo lwezibani luzobekwa ohlakeni lomnyango wokuphuma kokuphepha, cishe u-2m ngaphezu komhlaba. Vele, kwezinye izimakethe ezinkulu ze-elekthronikhi, izinxanxathela zezitolo nezinye izindawo, amalambu aphuthumayo anamakhanda amabili azobekwa odongeni ngqo ezinsikeni.
Empilweni yansuku zonke, kuvame kakhulu ukuthi isibani asikwazi ukusetshenziswa ngokujwayelekile ngenxa yendlela yokuxhuma engalungile. Ngakho-ke, kunconywa ukuthi ilambu ngalinye lesimo esiphuthumayo linikezwe ulayini ozinikele, ngaphandle kokushintsha phakathi. Izibani eziphuthumayo ezinentambo ezimbili nezintambo ezintathu zingahlanganiswa ekunikezelweni kwamandla. Ukuhlelwa kwamandla kagesi ngamunye okuzinikele kufanele kuhlanganiswe nemithetho ehambisana nokuvikelwa komlilo.
Uma kwenzeka kusha, njengoba kushunqa intuthu eduze kwaphansi, umuzwa wabantu wukugoba noma ukukhasa ubheke phambili ngesikhathi sokuphuma. Ngakho-ke, ukukhanya kwendawo okukhanyisa okuphezulu kusebenza kakhulu kunokukhanya okufananayo okulethwa ukufakwa kwezinga eliphakeme, ngakho-ke ukufakwa kwezinga eliphansi kunconywa. , Okungukuthi, nikeza ukukhanyisa okuphuthumayo kokukhishwa okuseduze nomhlabathi noma ezingeni eliphansi.
Isikhathi Iposi: Jun-15-2021